Indlela yokwandisa amehlo akho nge-makeup
Ubuhle bomfazi Iifake Amehlo
Amehlo amakhulu ahlala ehle kakhulu. Abafazi bazama ukuhlukanisa amehlo abo ngaphambili, kwaye indlela yokwenza iinqununu zeenkcukacha ze "cat" zichazwe nguCleopatra ngokwakhe.
Amakhulu amakhulu, amehlo achukumisayo athanda umdla. Kuwo onke amaxesha, izinto ezintsha zenzeke ekuhleni, kodwa ngokuqhelekileyo kugxininiso kwamehlo ahlala ebonakalayo. Sitshintsha kuphela iindlela olwabiwe ngazo.
Ukuba i-nature ayinakukuvuza ngamehlo amakhulu amakhulu, ayinandaba. Kuza kubekho, zininzi iindlela zokwandisa amehlo akho nge-makeup, uhlala kuphela ukukhetha enye evumelana necala lakho. Kule meko, kukho ubuchule obungasetyenziselwa ukwakheka kwansuku zonke, okwenzelwa umsebenzi.
Ukuba unethamsanqa ngokwaneleyo ukuba ube neenyawo ezinkulu kunye ezicacileyo, akufuneki ukuba uzame ukwabelana ngazo, ukongeza.
Kuphosakeleyo ukucinga ukuba kuphela izithunzi ezimnyama zandisa amehlo. Oku kuya kuphunyezwa kokubili ngoncedo lomnyama, kunye nosizo lwezithunzi ezikhanyayo kunye neepensile, kwakunye nokudibanisa kwamathoni alula kunye namnyama.
Masiqale ngezona zinto zinzima kakhulu: njani ukwandisa amehlo kunye nokwenzelwa kwimibala ekhanyayo kunye emnyama yezimonyo. Le yinkqubo yobugcisa eya kunceda wonk 'ubani onamehlo enyama ngokwenene akabi kakhulu.
Okokuqala kufuneka ugxininise ukuma kwamehlo. Ukusebenzisa ipenseli emnyama, kufuneka udwebe umgca omncinci eduze kwesiseko sokukhula kwee-eyelashes. Umgca ukhankanywa kwiibophezelo eziphezulu kunye neephantsi, kufuneka ukuba zenzeke kancinci kwiinkalo zangaphandle zamehlo.
Ukusebenzisa umfaki-sicelo, sisebenzisa kwaye sithuthule emthunzini omnyama phezu kwesihlwele sekhosi ephezulu. Thatha imithunzi emnyama okanye emnyama, kodwa kungabi mnyama.
Imibala e-pink, i-beige, umbala we-peach isetyenziswe kwi-eyeridi ephezulu ehambayo, ngaphantsi kwemithunzi emnyama esiyifake kwi-crease. Kwakhona izimbalwa ezimbalwa zisetyenziswe phantsi kwekona langaphandle lehlohlo kunye nasemacaleni angaphakathi kwamehlo, kufuphi nebhuloho yempumlo.
Ngoku sekuyisikhathi sokuba ipensela yokukhanya. Umbala omhlophe okanye oqinileyo ugxininisa ijwabu leso elincinane, uhamba kancane ukusuka kumgca omnyama owawubambe ngepensile ngaphambili. Umgca ubanjwe ungaphantsi kwepensile emnyama, kodwa ngaphezu kwawo, phantse kwi-mucosa yejwabu lezantsi.
Imibala yemithunzi ihlanganiswe ngale ndlela: i-gray kunye nepinki, imnyama emnyama kunye ne-beige, i-brown kunye ne-peach. Ukuba umbala wezithunzi uhambelana nombala wamehlo, umphumo wesicelo sakho uphuculo.
Ukongeza, unokwandisa amehlo akho nge-eyelashes ende. Eyelashes eyelashes kunye nezixhobo ezikhethiweyo kunye nombala ngokukrazula okanye kwandisa inki. Impembelelo enkulu ngakumbi inokufezekiswa ngokugqithisa kwiinkalo zangaphandle zamehlo angaphantsi kwe-cilia.
Ngoku malunga nokuzenzela usebenzisa imibala ekhanyayo. Kufanelekileyo ngokusemini. Ikhosidi ephezulu kunye nekona langaphakathi lamaso lidityaniswe nemithunzi emnyama. Ngaphantsi kweshihlo kusetyenziswe izithunzi ezimbalwa zokukhanya, kunye nomda wokukhula kwe-eyelashes ujikelezwe yipencilensi elula. Kulo lungiselelo kungcono ukuthatha umbala oqinileyo okanye wesilivere ipensela. Le ipensela idibene kunye naluphina umthunzi wezithunzi. Ukulungisa ukuma kwamehlo, ipensela isetyenziswe ngeendlela ezahlukeneyo:
- kuphela ekhoneni langaphandle lelihlo kuze kube semkhatsini wekona langaphakathi lejwabu leso;
- kuphela kwi-eyelidi ephantsi;
- kwiibophezelo ezingaphezulu kunye nezantsi ezantsi komgca wokukhula kwe-eyelash, kwikona elingaphakathi liso kwaye ulula kancane umgca kwikona yangaphandle yalo.
Indlela yokugqibela yokusebenzisa ipencil ingasetyenziselwa ukulungiselela ukuhlwa. Enhle kakhulu kunye neyantlandlolo kukudibanisa umbala we-chocolate kunye nepensile yegolide.
Amehlo omsiza okanye "amehlo aphefumayo" aphume ngefashoni ngamaxesha amaninzi. Unokwenza oku kulungiselelwa kungekhona nje ngoncedo lombala omnyama kunye nomnyama omthunzi wezithunzi, kodwa kunye nokudibanisa kwebala elimnyama, eluhlaza, eluhlaza okwesibhakabhaka. Ukuze uphume ngokumangalisayo lo makhelo awuyi kukhangeka. Khumbula indlela yokwenza ngayo. Uzakufuna ezimbini okanye ezintathu zethunzi elimnyama, ipenisi emnyama okanye emnyama. Siqala ngeethunzi ezikhanyayo. Zifakwe kwikona langaphakathi lelihlo nangaphantsi kwehlosi, ngaphaya komgca wefowuni kwesoliyeli eliphezulu. Ngesiqingatha se-eyelid esiphezulu yeselula, esondele ngakumbi kwibhulorho yempumlo, sisebenzisa izithunzi ezimnyama. Umbala omnyama kakhulu (ngokuqhelekileyo umnyama) usetyenziselwa kwiibophezelo eziphezulu nakwezantsi ukusuka kwinqanaba ukuya kwinqanaba elingaphandle kunye nxamnye neetempile. Iimvulo zixutywe ngokucophelela ukuze zenze iinguqu ezigqithiseleyo zombala. Emva koko intambo yamehlo isekelwe ngepensile emnyama.
Ukusebenzisa ukwakheka ukufezekisa amehlo amakhulu kunye nokucacisa, kufuneka uqikelele ukuba izithunzi ziba matte kwaye zikhanya. Imibala kunye nemithunzi emnyama imisa kwiintsika: intambo yesipuphu esiphambili kunye nekona langaphandle kwiso. Ukukhanya okuthunyiweyo kwezithunzi kufaka iindawo ezinqabileyo zeebhokhwe kunye phantsi kweelishi. Imibala kunye neempawu ezikhanyayo ziphucula umdlalo wombala. Ukuba izithunzi ezimnyama zithe zithi zikhanye, zingafanelanga umgomo wethu.
Ukwandiswa kwamehlo kunokwenzeka ngokuncediswa kwesohlwayo sokulungisa. Ngenxa yoko, iinki zihluthwa ukwenzela ukuba iingxowa zawo zangaphandle ziphakanyiswe kancane. Sifinyelela oku nakhona xa izithunzi ezimnyama ziphakanyisiwe phantsi kweelishi.
Ukuze wenze amehlo akho angaboni kakhulu, zama ukuphepha ukusebenzisa imali ngeempawu ezahlukeneyo, kunye nezithunzi kunye neepensile ezisekelwe kwioli. Iziqholo ezinjalo aziqhelekanga ukuba zenze ukutyhalwa. I-fable okanye i-compact shades iya kufana nathi.
Xa kugxininiswa kwamehlo, akusiyo isiko ukupenda imilomo nge-lipstick eqaqambileyo. Iimpawu zendalo ezifanelekileyo, ukukhanya okubonakalayo, kunye nokukhanya komlomo - beige okanye igolide. Leli xesha ngemfesane yomlomo, onokufunyanwa ngomlomo, ukwandisa umthamo womlomo.
Unako ukwandisa amehlo akho nje nge-mascara enokululeka, okanye ngoncedo lweeyela ezikhohlisayo. Ukuba ingxaki ingabonakali kakhulu, kwaye ufuna nje ukugxila kwamehlo, ungasebenzisa ipencil ukulungisa ukusikwa kweenkopheko. Sisebenzisa ipensele emnyama yecala langaphandle lamehlo, kunye nokukhanya kwecala langaphakathi.
Indlela yokudweba iintolo kwi-eyelidi
Ukujongwa kwesidalwa: Ukufunda ukwenza ukwenziwa kwe "Eye Eye"
Indlela yokwenza isithunzi somso?
Izifundo zokwenza ngokufanelekileyo ngamehlo amakhulu
Ukusuka eParis ngoLuthando: i-palette yezithunzi eziseLancôme AUDA [ISIXEKO] eParis
Iinqwelo ezinobumba bebindi
Iingxaki zabatshatileyo kwintsapho yanamhlanje
Funda uhlobo lomntu
Oluhlaza kunye elihle: Indleko yonyaka omtsha yomthi weKrisimesi intombazana
I-Shrimp phantsi kwe-brandy
Ukutya okulula kwitheyibhi yokutya
Abantwana okanye abazukulu: UValeria waqala ukubonisa amawele, no-Anna Shulgina wacaphukisa kwiifoto zabantwana
Ukungakhuselekanga komntwana: ukwakha
Ukudideka kwamadoda emva kokuhlukanisa - njani ukutshintsha oku?
Isaladi yamatamatisi othosiweyo
UKeti Topuria kunye no-Alexey Dolmatov (iGuf): uhlanga okanye ubuhlobo
I-Astragalus iipropati ezisebenzayo kunye nokusetyenziswa kwayo kwiyeza
IHososcope ngoFebruwari 2018 - Owesifazane-Aquarius - ukusuka eTamara Globa kunye no-Angela Pearl
Isaladi kunye nemifuno ekhethiweyo
Iintlanzi zeefestile ezintle kakhulu kwiimfwenkwezi